राजनीतिक दलको कमाइखाने भाँडो निजी विद्यालय, किन धनी र गरिबका सन्तानले समान शिक्षा पाउँदैनन् - Baikalpikkhabar
राजनीतिक दलको कमाइखाने भाँडो निजी विद्यालय, किन धनी र गरिबका सन्तानले समान शिक्षा पाउँदैनन्
देशमा असमान आर्थिक अवस्था भएका मानिस छन् । गिटीबालुवा कुटेर मजदुरी गरेर खाने छन् भने कोही मध्यम वर्गीय र उच्च आर्थिक अवस्था भएका मानिस छन् । तीन वर्गका मानिसले आफ्ना सन्तानहरुलाई पढाउने स्कुल पनि फरक फरक छन् । फरक स्कुलबाट निस्कने जनशक्ति पनि स्वभावतः फरक हुने भयो । आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारले आफ्ना बच्चालाई गरिबका छोराछोरीसँग पढाउन आफ्नो हैसियत र इज्जतका नाममा आफ्ना बच्चालाई सरकारी स्कुलमा पढाउँदैनन् । मजदुरी गरेर छोराछोरीलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाए भने मेरो हालत के हुने हो भन्ने प्रश्नले अभिभावकलाई सताउँछ । त्यसैले इज्जत र मानसम्मानका नाममा निजी स्कुल फस्टाउँदै गए । पञ्चायतकालमा निजी स्कुलहरू कम थिए, अहिले झन् बढे । नेपालमा निजी विद्यायलय बढ्नुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरु हुन् । धेरै निजी स्कुल हुने पार्टी क्रमशः तत्कालीन नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, पूर्व माओवादी केन्द्र र मधेसी दलहरुको निजी स्कुलहरु छन् । निजी विद्यालयहरुको सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरु प्रत्यक्षरुपमा विभिन्न पार्टीमा संलग्न छन् । राजनीतिक दलहरुको मुख्य उद्देश्य भनेको निजी विद्यालयबाट नाफा आर्जन प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ ।
२०७४÷७५ को शिक्षा आयोगको मूल सार एउटै थियो किनभने ०७५ सालको आयोगले निजी विद्यालयको सन्दर्भमा १० वर्षसम्ममा निजी विद्यालय बन्द गर्ने, २०७४ को आयोगमा नै निजी विद्यालय भनेको गैरनाफामूलक हुँदैन । ती विद्यालय नाफा चल्छन् । त्यसैले निश्चित मापदण्ड बनाइदिनुपर्छ । जस्तै; ५० प्रतिशत शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब दिने व्यवस्थ गर्ने, २५ प्रतिशत त्यही विद्यालयको विकासमा खर्च गर्ने, २५ प्रतिशत लगानी गर्नेहरुले लिने गरेर निजी विद्यालय चलाउन सकिन्छ । यस्ता सुझाव समेटेर रिर्पाट दिएका थियाँै । त्यस आधारमा अगाडि बढेको सबै समान शिक्षाको पहुँच पुग्थे ।
त्यसैले दोयमलाई अब्बल बराबर बन्नुपर्छ । तिमीहरुलाई यो यो कुरा उपलब्ध गराउँछौँ भनेर भन्ने । यदि यो समयमा यो काम अब्बल सावित भएनौ भने कारबाही हुन्छ भन्ने । सिमलाई पनि प्याकेज दिइनुपर्छ । ६, ८ महिनामा दोयम जस्तो बन्नुपर्छ भनेर कडा निर्देशन र प्रोत्साहान दिइनुपर्छ । त्यस्तै चाहारलाई कान समातेर कडा निर्देशन दिइनुपर्छ । चाहार तहमा भएको स्कुलहरुलाई न्याय गर्ने कि कलिला बालबच्चालाई न्याय गर्ने , त्यसलाई झन् कडाइ गर्नुपर्छ ।
यो जमानामा मोबाइल र कम्प्युटरबाट पढाउन नसक्ने र बच्चाहरुको आकाङ्क्षाअनुसार पनि पढाउन नसक्ने शिक्षक हुन्छ , त्यस्ता शिक्षकलाई सरकारले पाल्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसैले बच्चाको मनोभावना बुझेर पढाउन नसक्ने शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने वा निकल्ने आँट सरकारको छ ,
उहाँहरुले पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री बनाएर देखाउनुभयो । उहाँहरुसँग बसेर संवाद पनि गर}। त्यो पाठ्यक्रम सङ्घीय सरकारले बनाएभन्दा उत्कृष्ट थियो । भक्तपुर नगरपालिकाले बनाएको पाठ्यक्रम शिक्षामन्त्रीलाई बुझाउँदा मैले भनेको थिएँ, विज्ञहरुले बनाएको पाठ्यक्रमभन्दा कम छैन । बुटवल र रुकुमका स्थानीय तहहरुले निर्माण गरेको पाठ्यक्रम पनि राम्रो छ । त्यसैले नेपालको विविधतालाई सङ्घीय पाठ्यक्रमले समेट्न सक्दैन । स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्क्रम निर्माण गर्न सक्छन् । मुस्ताङमा बस्ने बच्चाले स्थानीय गुम्बाहरुका बारेमा थाहा पाउन जरुरी छ । काठमाडौँमा भएको पशुपति मन्दिरको बारेमा थाहा पाउन पनि जरुरी हुन्छ ।
त्यसैले मुस्ताङका बच्चाहरुलाई त्यहाँ भएको गुम्बा जस्तै काठमाडौँमा मन्दिर रहेछन् भनेर बुझाउन सक्ने क्षमताको पढाइ हुनुपर्छ । यसरी स्थानीय तहलाई पाठ्यक्रम बनाउन प्रोत्साहान नगर्ने हो भने विविधता र समावेशिताको कुरा बोल्न पाइएन नि ? बोलिसकेपछि राजनीतिक दलहरुले पूरा गर्नु पर्यो । यो सकिने काम हो । केही स्थानीय सरकारले राम्रा काम गरेका छन् तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारले साथ दिन मान्दैनन् । साथ दिन नमान्नुको कारण के हो भने नेताहरु आफ्नो अधिकार खोसिने भो भनेर डराए । जस्तै, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सङ्घीय ऐन नबेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी ऐन नबनाउनु भनेर आदेश जारी गरे । त्यो भनेको ठाडै बेमानी हो । किनभने निर्वाचन चाहिँ स्थानीय तहबाट सुरु गर्ने ऐन चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेश तहले बनाएर सुरु गर्नु नहुने ,
अदालतले एकल अधिकार र साझा अधिकारका बारेमा जानकारी दिनुपर्यो । एकल अधिकारभित्र राखेका कुरालाई एक्लै गर्न दिनुपर्यो । एकल र साझा अधिकार थाहा नपाउने शिक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु छन् । शिक्षामा त साझा अधिकार हुनुपर्छ नि । एकल अधिकारभित्र भएका शिक्षाका कुरा उनीहरुलाई गर्न दियो भने राम्रो हुन्छ । विपन्न तथा सम्पन्न विद्यार्थीहरुले समान वातावरणमा समान तरिकाले अध्ययन गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले जिम्मा लिएर विद्यार्थी भर्ना दर अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना छ । एक कक्षामा १३ लाख भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये १० कक्षासम्म आइपुग्दा करिब ५ लाख मात्रै हुन्छन् । स्थानीय सरकारले चाहेको खण्डमा बीचमा विद्यालय छोड्ने ८ लाख बालबालिकालाई स्कुलमा ल्याउने वातावरण बनाउन सक्छ .
बुधबार, ११ भदौ, २०७६, दिउँसोको ०४:१६ बजे